Afaanii fi qubeessuu jiran, murfisa fi waa dhugoomsaa cita muraalee kan muraa filatamee ifteessa. Cita muraalee dursa isaaniitiin qindeessuu dandeessa.
Tarree Afaan keessaa afaan filadhu.
Mata duree Qubeessuu, Murfisa fi Waa dhugoomsa jalatti muraalee hunda kan afaan kanaaf kakaafaman asxeessa.
Amma cita muraa tokkoo ol kan naannoo tokkotti jiran qabdutti, citni muraalee kan qubeessuu fi waa dhugoomsuu tartiiba tarreeffamaniin hojjetamu. Tartiibicha qabduulee Ol Deemsisi fi Gad Deemsisi fayyadamuudhaan jijjiiruu dandeessa.
Murfisa jalatti cita muraa tokko qofatu kakaafamuu danda'a.
Afaan muraa ifteessa.
Badheelee filannoo LibreOffice keessa jiran hundaaf, kan armaan gadii raawwata:
Dursa muraa sanduuqa tarree keessatti filatamee sadarkaa tokkoon guddisa.
Dursa muraa sanduuqa tarree keessatti filatamee sadarkaa tokkoon xiqqeessa.
Jijjiirraa ammaa sanduuqa tarree keessaa gaabbuuf as cuqaasi.
Title is: Muraa gulaalaa